LOTTE ဟိုတယ် ရန်ကုန် Official Website | Myanmar Yangon Five-Star Hotel
Global FindaHotel My Reservations ကူပွန်များ My Page ေလာ့ဂ္အင္ Logout
SUPER REWARDS LOTTE HOTELS & RESORTSတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီတည်းခိုရင်း Pointsသုံးဆရယူလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Due to COVID-19, certain measures and booking policy
လိုတေးလ်ဟိုတယ်၏ အထူးကမ်းလှမ်းမှု ပိုမိုကြည့်ရှုရန်
Exquisite Sweet Treat
Pairing your staycation with an exquisite afternoon tea experience.
ကာလ : 2022-07-01 - 2022-07-31
ကြိုတင်မှာယူမှုများ : 2022-06-24 - 2022-07-30
PACKAGE From 160 USD
Balancing Lifestyle Experience with LOTTE
Rope in your other half or bestie forarelaxing spa-cation for two at LOTTE HOTEL YANGON.
PACKAGE From 175 USD
Let’s Chill @ LOTTE
Enjoy chill moment with us on this joyful occasion and be spoilt with diversified dining options.
PACKAGE From 155 USD
ကာလ : 2022-01-01 - 2022-12-30
ကြိုတင်မှာယူမှုများ : 2022-01-01 - 2022-12-30
ROOM From 92 USD
[REWARDS Members Only] 14 Days Advance Purchase - Room Only
Rewards Member | Special Rate
ROOM From 81 USD
14 Days Advance Purchase - Room Only
14 Days Advance Purchase | Room Only
ROOM From 87 USD
New experience of Lotte Hotel Yangon
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလှပဆုံးနေရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်းလျားကန်နံဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ဗိသုကာလက်ရာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ၂၉ လွှာအမြင့်ရှိကာ ရန်ကုန်မြို့တစ်ခွင်ကို အထက်စီးမှ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိက လမ်းမကြီးဖြစ်သော ပြည်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။
လိုတေးလ်ဟိုတယ်သည် ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း အလှပဆုံးနှင့် အဆန်းသစ်ဆုံးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အပြင် ခေတ်မီအသုံးအဆောင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
AWARDS WINNER OF 2021
လိုတေးလ်ဟိုတယ် ရန်ကုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် အထင်ကရအထိမ်းအမှတ် နေရာတစ်ခု ဖြစ်သော ရွှေတိဂုံဘုရား၏ မြောက်ဘက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပျော်ပွဲစားထွက်ရန် အထင်ကရ အဖြစ်ဆုံး နေရာတစ်ခု ဖြစ်သော အင်းယားကန်၏ အနောက်ဘက်တို့တွင် တည်ရှိပေသည်။
ဒေသတွင်း ရာသီဥတု အခြေအနေ
Location : No. 82, Sin Phyu Shin Avenue Pyay Road, 6½ Mile, Ward 11 MM ရန်ကုန်, 11052, မြန်မာ
Rooms : 343
စားသောက်ဆိုင်များ : 6
ဧည့်ခံခန်းမများ : 3
ဖုန်းနံပါတ် : +95-1-9351000 ခေါျရနျ
Room Reservations : +95-1-9351000 ခေါျရနျ
ဖက်စ် : +95-1-9351005
ထင်ရှားသော ဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့မှုများ : Meeting Room, Restaurant, Bar & Lounge, Spa, Jacuzzi, Pool, Fitness Center, Business Center, Club Lounge
Room size 36.6 ㎡
Room size 56.3 m²
သင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ ထည့်သွင်းပါ။
သတင်းအချက်အလက်ကို ဆက်လက်၍ လက်ခံမရရှိလိုပါက ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
သတင်းစာစောင် (စုစည်းမှု) လက်ခံရယူရန် သဘောတူခွင့်ပြုချက်
သတင်းစာစောင်များအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် စုဆောင်းမှုပြုခြင်းအပေါ် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)
1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် စုဆောင်းမှု အိုင်တမ်မျာအီးမေးလ် လိပ်စာ
2. စုဆောင်းမှုပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် အသုံးပြုပုံသတင်းစာစောင် ပေးပို့မှု
3. ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် အသုံးပြုမှု ကာလစာရင်းပယ်ဖျက်မှုပြုသည့် အချိန်အထိ
သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးရန် သင် ငြင်းဆန်ကောင်း ငြင်းဆန်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် သင်သည် သတင်းစာစောင်များ လက်ခံ မရရှိနိုင်ပါ။
သဘောတူ လက်ခံသည် (လိုအပ်သည်)
သတင္းစာေစာင္ကို လက္ခံရရွိရန္ သင္ဆႏၵမရွိပါက၊ စာရင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ သင္အသုံးျပဳသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ထည့္သြင္းၿပီး “စာရင္းဖ်က္ရန္” ကို ႏွိပ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ မပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သည္
ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ သတင္းစာေစာင္ စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ သင္၏ ဆုေပးမႈမ်ား ေၾကာ္ျငာသည့္ အီးေမးလ္ လက္ခံရရွိမႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိပါ။
ရန်ကုန်မြို့၏ ကောင်းကင်ယံ တွင် မြင့်မားစွာ ထိုးထွက်နေပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ခေတ်မှီမော်ဒန် ဗိသုကာလက်ရာဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော Lotte Hotel Yangon သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကြယ်5ပွင့် ဟိုတယ်များအတွက် စံချိန်စံညွှန်း မှတ်ကျောက်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဝင်းလက်တောက်ပနေပြီး နိုင်ငံ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည့် ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ် ထားရာ ရွှေတိဂုံ စေတီကို ဟိုတယ် တောင်ဘက်တွင် တွေ့နိုင်ပြီး၊ အရှေ့ဘက်တွင် လူးလွန့်လှုပ်ရှားနေသော အင်းယားကန်၏ ရေပြာပြာများ တည်ရှိသည့် Lotte Hotel Yangon သည် နှစ်သက် ်သဘောကျဖွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်အကြားတွင် တမူထူးခြားစွာ ရပ်တည်၊ နေပါသည်။ Lotte Hotel Yangon ၏ Premier Suites များသည် အင်းယားကန်အား အပေါ်စီးမှ ရှုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ု်ပ်တို့၏ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင်ခန်း အမျိုးမျိုး နှင့် နိုင်ငံတကာပွဲ အစီအစဉ်များ၊ ဟောပြောပွဲများ လက်ခံကျင်းပရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည့် ဧည့်ခံခန်းမများတို့ဖြင့် ပနံရ တင့်တယ်လှပါသည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဧည့်ဝတ်ပျူငှာမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များအနေနှင့် ရွှေနိုင်ငံအား ပိုမို စူးစမ်းလေ့လာရန် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ပြင် နားနေခန်းငယ်များ၊ မြင်ကွင်းကျယ် ရေကူးကန်နှင့် ရေကူးကန် ဘေးဘားများ ကဲ့သို့သော အပြင်ဘက် နေရာအမျိုးမျိုး သည်လည်း မိသားစုများနှင့် ချစ်သူစုံတွဲများတို့အတွက် တမူထူးခြားသော လည်ပတ်မှု အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အထူးစီစဉ်ထားသည့် ဟိုတယ်ပတ်ကေ့ဂျ်တွဲများ၊ အခန်း ပရိုမိုးရှင်းများ၊ အထူး ဈေးနှုန်းလျော့ချမှုအစီအစဉ်များ အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို လေ့လာစုံစမ်းကာ Lotte Hotel Yangon တွင် သင်၏ အခန်းအား မှာယူလိုက်ပါ။
Voice of Customer Contact Us Ethcis Hotline Careers
Business Inquiry Employee Sitemap